လွှတ်ပေးတာ ကာလုံ မဟုတ်ဘူး .. သမ္မတကြီး ပေးတာပါ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » လွှတ်ပေးတာ ကာလုံ မဟုတ်ဘူး .. သမ္မတကြီး ပေးတာပါ …
လွှတ်ပေးတာ ကာလုံ မဟုတ်ဘူး .. သမ္မတကြီး ပေးတာပါ …
Posted by မှော်ဆရာ on Jan 13, 2012 in Politics, Issues | 45 comments
နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လွှတ်ပေးတာ ဆိုင်းငံပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ဆိုတော့ အပြည့်အ၀ လွှတ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် အလဲဗင်းကတော့ ဟောသည်လို ရေးပြထားပါတယ် ..။
ယခုအကြိမ်ပေးသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ထောက်ခံချက်နှင့်ပေးသည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သဘောဆန္ဒနှင့် ပေးခြင်းဖြစ်သည်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည့် အမိန့်ကြေငြာစာပါ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့် ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၁(၁)အရ သိရသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၁(၁) တွင် ဆိုထားသည်မှာ ‘ ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးသည့်အခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် မည်သည့်အခါမဆို စည်းကမ်းချက် မထားဘဲဖြစ်စေ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသူ သဘောတူသည့် စည်းကမ်းချက် တစ်ခုခုထား၍ဖြစ်စေ ၄င်းအပေါ်ချမှတ်သည့် ပြစ်ဒဏ်အတည်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည် (သို့) ၄င်းကို စီရင်သည့် ပြစ်ဒဏ်အားလုံး (သို့) အစိတ် အပိုင်းတစ်စုံတစ်ရာကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးနိုင်သည်’ ဟု ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ထောက်ခံချက်နှင့်အညီ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၄ (ခ) အရ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းပုဒ်မ မပါရှိသောကြောင့် သမ္မတကြီး၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ပေးခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အခုလို လွှတ်ပေးတဲ့ အချိန်မှာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မှာလဲ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းများအရ သိရှိရပါတယ် …။
ကမှော့်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် သမ္မတကြီးဟာ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အာဏာကို တတ်နှိုင်သမျှ ထုတ်သုံးပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာလို့ ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ် .. ။ ပြည်သူတွေရှေ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် မားမားမတ်မတ် ရပ်ခဲ့သလို .. ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကလဲ သမ္မတကြီးနောက်က ညီညီညွတ်ညွတ် လိုက်သင့်ပြီလို့လဲ ထင်ပါတယ်..။
ဒီတော့ ပြည်သူ့ဘက်ကို အများကြီးပြန်ကြည့်တဲ့ .. ပြည်သူ့လိုအင်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကို ပြည်သူ့ဘက်က ပြည်သူ့ သမ္မတကြီး လို့ပဲ ဆိုလိုက်ပါရစေ …။
မှော်ဆရာ ပြောတာ အမှန်ပါဘဲ
ဒါနဲ့ ဘယ်က ခေးမ လေး ကို ခေါ်ဆော့နေတာတုန်း
ပုံကို ကြည့်ရတာ အသဲယားလိုက်ဒါအေ
ဟုတ်ပါ့ ကိုပေရေ၊ မတော် လက်နှစ်ဖက်မှာ ချည်ထားတဲ့ကြိုး ပြတ်ကျလို့ကတော့ ခေးမလေး အောက်ကို ဘုတ်ကနဲပဲ။
နာတို့ သမဒကြီးကို ထိရဲထိကြည့် မီးပွင့်တွားမကွ..
ကိုသိန်းနောက်မှာ သများတို့ ရှိတယ်နော်..
ဒါကြောင့်လဲ တစ်ခုခုဆို ကိုသိန်းကိုပဲသများတို့ က အားကိုးနေရတာကလား.
သမ္မဒဂျီးနဲ့ သူမ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ သမ္မဒကြီးဆီမှာ ပွင့်လင်းမှု့အချို့တွေ့တယ်ဆိုတာလေးပါ
အဖွားကြီးကိုယ်တိုင်က လွှတ်ပေးပါတော့လို့ ထပ်အော်ရတာဘဲမဟုတ်လား
သူလည်း အကြပ်အတည်းထဲက ရုန်းကန်နေတာလား
ကျုပ်တို့ဆဲတာထက် အဆပေါင်းပိုတယ်ဆိုတာလေး သတိချပ်ကြဘို့ပါ
တကတဲ။ ဘာပုံကြီးတုန်း။ မြို့မေတ္တာခံယူမလို့လား။
ဒါ ဘဘု ရဲ့ ယတြာ ပါ သဲနုရေ။
ဘကြီးဘု ကို အမြင်မမှားပါနဲ့။ :-)
ကာချုပ် ငထုံ(ရှာရှေနဲ့ …ငထုံနဲ့ ထိုင်း အတူတူဗျဲ.) သွားနေတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းအတွက် ..ကျေးကျေးပါကမှော်ရေ…
ဒါနဲ့ ..ဘကြီးစိန် လုပ်ပေးတာဆိုတာ ကျနော်တို့ သိကြပါတယ်ဗျာ….
ဘယ်သူက ကာချုပ်လို့ ပြောနေလို့လဲ ဟင်င်င်
ဇဂါးမစပ် အဗေတာ မိုက်တယ်မလား …
ကိုဂီက အရင် စချိန်းပြပါ …
နောက်က လိုက်ပါ့မယ် …
ပြောင်းထားတယ်လေကွယ် ..အသိန်းရယ် …
စိုင်လေးပဲ တွေ့တယ် စိန်စိန် ..
တို့သမ္မတကတော့ ဆံပင်မကောက်ဘူးထင်တယ် …
သကြားဆာဗီ သဂျီးဆာဗာက မျက်လှည့်ပြတယ်ထင့် …
wp-admin ထဲက ဘယ်ဘက်ထောင့်က ကောမန့်လစ်ထဲမှာကြည့်ရင် တော့
တို့ ဘဘရဲ့ အားနည်းချက်ကို တို့ ..ခုလိုချိန်မှာ ဘယ်ကြည်စယ်ရက့်ပါ့မလဲ
ဆိုလိုချင်တာက ထောင်ထဲမှာ ညောင်းနေမှာစိုးလို့ ခဏ အပြင်ထုတ်ပေးတာလားဟင်…
သတင်းလေးတွေကို နဲနဲဆက်စပ်ကြည့်ရင် ဆိုလိုချင်တာလေး သဘောပေါက်လိမ့်မယ် .. ကြောင်ဝတုတ်ရေ ..
သူ့အလိုအရ ဆို လွှတ်တာကြာပြီလို့တောင် ပြောပါတယ်.. သူ့မှာလည်း ဖိအားတွေ ရှိပုံရပါတယ်..
ဒီလောက်ဆို ကျမတို့တွေလည်း သူ့ကို ယုံကြည်သင့်ပါပြီ..
ဒီမှာလဲ ပုံလေးတွေ တင်ထားတယ်
ကချင်ကိစ္စ ကချင်ကိစ္စ ကချင်ကိစ္စ
သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးများစွာတင်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတော့တယ် ….
ဆြာမှော်ရေ………. နော်တို့သမးဂျီးကတော့ ဆက်လုပ်စရာတွေ လုပ်နေပြီ။ ကျန်တာလေးတွေ ဆက်လာဖို့ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့် သုံးပြီးတော့ ……… ၅၀၀၀ SIM လိုကိစ္စလေးတွေကနေ ကြီးမားတဲ့ အချိန်းအပြောင်းတွေ………………….
ဆြာမှော်ရေ………. နော်တို့သမဒဂျီးကတော့ ဆက်လုပ်စရာတွေ လုပ်နေပြီ။ ကျန်တာလေးတွေ ဆက်လာဖို့ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့် သုံးပြီးတော့ ……… ၅၀၀၀ SIM လိုကိစ္စလေးတွေကနေ ကြီးမားတဲ့ အချိန်းအပြောင်းတွေ………………….
အေးဗျာ သမ္မတကြီးရော- လွှတ်ပေးဖို့  တိုက်တွန်းပေးသူ၊ လွှတ်ပေးဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးသူ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
အရေးထဲမောင်ကင်းက ကြော်ငြာဝင်နေသေးတယ်…မှတ်ထားကြ ရွာသားတို့..
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လို့ ရဲရဲကြီး သတင်းစာမှာတပ်တာဟာ ဒီနေ့နဲ့မှ ကိုက်ညီပါတယ်။ ပထမတစ်ခါတုန်းက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အစားထိုးရေးရမှာ နှစ်ကြီးသမားများ လျှော့ပေါ့ပေးတယ်လို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ရပါမယ်။
ဒီသတင်းကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အထဲမှာနေရတာထက်စာရင် အပြင်မှာနေရတာက ပိုလွတ်လပ်ပြီး ပိုစိတ်ချမ်းသာပြီး မိသားစုနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးနေနိုင်မယ်ထင်တာပဲ။
ဘယ်သူကပဲ လွှတ်ပေးပေး လွှတ်ပေးဖို့က အဓိကပဲလေ…ပြည်သူတွေလေးစားယုံကြည်မူကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပဲပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အစိုးရအနေနဲ့သိရှိနားလည်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေ…လက်ရှိအစိုးရအပေါ်မှာ ပြည်သူတွေလက်ခံယုံကြည်အောင် မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်….အကောင်းဆုံးပါပဲလို့မြင်ပါတယ်…
သမ္မတကြီးကပြည်သူတွေတင်မြှောက်ထားတာ မဟုတ်ပေမဲ့အခုကတော့ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ကြောင်း သက်သေကောင်းကောင်းပြလိုက်နိုင်တာမို့ ရှေဆက်ပြည်သူ့ဘက်က အနှောက်အယှက်ကင်းကင်း ရပ်တည်နိုင်အောင်သမ္မတကြီးကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံအားပေးရင်း သမ္မတကြီးနောက်ကနေရပ်တည်နေပါကြောင်း။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘ၀ရင်းပြီး… လုပ်ပေးတာတွေလို့ပဲ..ရိုးရိုးလေး မြင်မိပါတယ်..။
လွတ်လာတဲ့လူတွေထဲ.. ဦးခင်ညွှန့်နဲ့သူ့လူများဖမ်းခဲ့တဲ့.. အမျိုးကောင်းသားတွေဘယ်နှယောက်များပါမလည်းမသိဘူးနော်..
အရင်ကထက်စာရင် နီးလာတယ်လို့တော့ ကြံဖန် အကောင်းမြင်ကြည့်ပါတယ်။
ယူအက်စ်နဲ့ အနောက်အုပ်စုရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို
ဝေးကွာနေတဲ့ မိသားစုတွေ ဆုံဆည်းကြလို့ သိပ်ပျော်နေကြမှာပါ။
လွတ်မြောက်လာတဲ့ မိသားစုတွေ ကောင်းစွာ ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေ။
လွတ်မြောက်သူတွေလည်း ကျန်းမာရေးတွေ ကောင်းကြပါစေ။ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မိသားစုတွေ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေနိုင်ကြပါစေ။
အိုင်ဝမ်းသာ မောသန်း အိုင်ကန်ဆေး………..
ကိုfatty cat ရေ..ကျနော်တော့အကိုပြောသလို……ပဲထင်လိုက်မိသေးတယ်…..(နောက်တာနော်.)
တကယ်တမ်းဆို…. ဦးသိန်းစိန်ကရော ဘယ်သူလဲ…… သူသာ အခုသမ္မတမဖြစ်ရင် သူလဲ…စစ်အစိုးရအုပ်စုဝင်ထဲကလူဆိုပြီး ….တော့ပြောကြဦးမှာပဲ……. သူကစစ်တပ်ထဲမှာ နှစ်၃၀လောက်…… ကျင်လည်ခဲ.တာ….. .သူလဲအရင်ကဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲ…… သူကအခုဘာလို့ပြောင်းလဲသွားတာလဲ…….. ရလဒ်ကကောင်းပေမယ့်…. သူတို.ရဲ.အပြစ်တွေကိုမြန်မာလူမျိုးပီပီ….. ပြီးပြီးရောဆိုပြီးမထားလိုက်ကြပါနဲ့……. သူတို.ကပဲတိုင်းပြည်ကို….. နှိပ်ဆက်ခဲ.တာပါ……… သူတို.ဒီလောက်လုပ်ပေးရုံနဲ.တော့…. မကျေသေးဘူးနော်…. အခုမှအကြွေးကစဆပ်တာ…
မယုံကြပါနဲ. စောင်.ကြည်.ကြပါ……. ကိုယ်.အင်အားကိုစုစည်းပြီး ကျစ်လစ်အောင်လုပ်ထားဖို. အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ…… လိုလဲလိုအပ်နေပါပြီ…….. သူတို.ရဲ.ဂွင်နော်ဒါက…. ကိုကြီးသိန်းကကြိုးကိုင်နေတာ…. အနောက်အုပ်စုဆီက လိုချင်တာတွေရှိနေလို့……… မျောက်ပြဆန်တောင်းသဘောနဲ့……….. တောင်းစားဖို.ဂွင်ဆင်နေတာ
ဒီအချိန် မှာတော့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု ထားပြီး လုပ်မှ အားလုံး (မည်သူမဆို) Win-Win Situation ရမှာပါ။ မဟုတ်ဘဲ အာဃာတ တွေ ဆက်ထား မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို အခြေအနေမျိုး ကနေဘယ်တော့မှ ရှေ့တက်လို့ ရမှာမဟုတ် ပါဘူး။
အားလုံး စည်းလုံးဖို့ နဲ့ ညီညွတ် ဖို့ သာလိုတာပါ။
တစ်ဖက် က လဲ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေ မှန်ကို သိစပြုလာပြီ ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ မင်္ဂလာရှိသော သမိုင်းဝင် နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အဲဒီလို အတွေးမျိုး ရှိခဲ့ရင် .. အခုလို ပျော်စရာအချိန်တွေ ရှိမလာနှိုင်ဘူးလို့ ပြောရင် လက်ခံမလား …
ဒေါ်စုတောင် ဒီလို အတွေးမျိုး မရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကရော ……
ဒီနေ့ကတော့ တကယ့်ကို surprise ပါပဲ။ 13 Jan 2012 Fri ကတော့မြန်မာပြည်မှာမကြုံစဖူးထူးကဲတဲ့ surprise နေ့တနေ့ ပါပဲ။
အာဃာတ တွေထားနေရင် ဘယ်ပြီးတော့မလဲ၊ နိုင်ငံတိုးတက်အောင်လုပ်ဘို့အချိန်ရောက်ပြီ ၊ဝါးလုံးရှည်ကြီးနဲ့ သိမ်းမရမ်းနဲ့၊
ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးပါ…… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ. ခွင်.လွတ်စိတ်မျိုး လူတိုင်းရှိစရာ မလိုပါဘူး…..
ဒါနိုင်ငံရေးပါ….. .တစ်ဖက်ကရှေ့တိုးသလို တစ်ဖက်က ပြတ်ပြတ်သားသား တုန်.ပြန်စရာရှိတာတွေကို တုန်.ပြန်ရမယ်….. အန်တီစုလဲဒီလိုအတွေးရှိမယ်လို. ယုံကြည်ပါတယ်… အကောင်းမြင်တာ ကောင်းပါတယ်…. ဒါပေမယ်. လုပ်စရာရှိတာကို မငဲ့ကွက်ပဲပြတ်သားသင့်တယ်ဆိုတဲ. ခံယူချက်လေးကို ပြောချင်တာပါ…..
အေးအေးချမ်းချမ်း ကိုယ့်အမြင်ကို ဖော်ထုတ်သွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ဒေါ်စုလိုလူ တစ်ယောက်ထဲ ရှိလို့ တိုင်းပြည် ဒီလောက်ပဲ တိုးတက်တာပါ ..
ဒေါ်စုလိုလူ ၁၀ ယောက်လောက်ဆို ဒီထက် ၁၀ ဆ တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်..
ဒေါ်စုကို ကြိုက်ရင် .. လက်ခံရင် .. ကြည်ညိုရင် .
သူ့လို လူမျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ် … ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် …။
နောက်တစ်ခုက ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာ ဘယ်အတိုင်းအတာထိလဲ …
ကိုယ်ပြုသောကံ ကိုယ်သာ ခံရပါတယ် …
မင်းကိုနိုင် ကို ပြည်သူတွေ ကြိုဆိုတာနဲ့
ဦးနေ၀င်းရဲ့သား ဇွဲနေ၀င်းကို ကြိုဆိုတာနဲ့ … တူသလား ဆိုတာ ပြန်ကြည့်သင့်တယ် …
ဘယ်လောက်အထိတောင် ကွာခြားသလဲ …
ထောင်ထဲကနေ ခေါင်းမော့ထွက်သလား ၊ ခေါင်းငုံ့ထွက်သလား …
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ လူတွေကြားထဲမှာ ခေါင်းငုံ့နေရတာဟာ သေတာထက်တောင်ဆိုးတယ်လို့ ယူဆပါတယ် …။
သူတို့ ပြုတဲ့ကံတွေကို သူတို့ ခံနေရပါပြီ … ၀ဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်..
သူများအကုသိုလ်က ကိုယ့်အကုသိုလ် မဖြစ်ဖို့နဲ့ .. ရရှိထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလေး မပျက်စီးသွားဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် …။ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေ အပေါ်မှာ ဒေါ်ခင်ကြည် ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ
ထင်ရှားတဲ့ဥပမာအနေနဲ့ ရှိပါတယ် ..။
စကားမစပ် …. စာရေးရင် ဘားလေးကို ပုတ်ပုတ်ပြီး ရေးစေချင်တယ် .. နို့မို့ဆို စာတွေက နောက်တစ်ကြောင်းကို မဆင်းပဲ ဘေးကို အတန်းလိုက်ကြီးထွက်သွားပါလိမ့်မယ် …
ခင်ဗျားကြီးတို့ သဂျီးသမီးကို ပြန်ပေးဆွဲမယ်
ကာ လုံ ကပြောနေတာနော်။
ဘယ်ဟာ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်တာလိုရင်းဆိုပေမဲ့ ကောင်းတယ်လို့လဲဆိုရော
“ငါလုပ်တာ၊ ငါလုပ်ထားတာ” ဆိုတဲ့ သဘောဆောင်မလားဘဲ။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၀၂ ဦးလွတ်မြောက်၊၊ထောင်ထဲတွင်၂၀၀နီးပါးကျန်နေ
“အခုထိ KNU ကလည်း လွတ်ပေးပါလို့ မတောင်းဆိုသေးဘူး”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ဘာပဲပြောပြော … ဦးသိန်းစိန်ကတော့ မင်းလောင်းမှန်လို့ ဖုတ်သွင်းရထားဆိုက်သွားပြီလို့ ပြောရမယ် ထင်တယ် ဆရာသစ်ရေ ….
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကောင်းသွားပြီလို့လဲ ပြောလို့ရပါရဲ့ …
ထိုကဲ့သို့ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက် မတူမှုကို အကြောင်းပြု၍ မဟနမှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေ ထက် ထောင်တွင်း အကျဉ်းချခိုင်းစေခြင်းတို့လုပ်ဆောင်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါ/
သို့အတွက်ကြောင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်မတူညီသော အယူဝါဒများ၏ ဖိနှိပ်ခြင်းခံနေရတဲ့အပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ စေ့စပ်ငြိနှိုင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ အကျိုးကိုလည်း ထပ်မံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုလျှင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကော၊ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ပါ အကျိုးများမည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
သမ္မတကြီး ကြားပါစေဗျာ …